चर्नावती जलविद्युत आयोजनाको सेयर खुल्यो - Awajonline Online Newspaper
चर्नावती जलविद्युत आयोजनाको सेयर खुल्यो
करिब ४ वर्षअघिदेखि उत्पादन सुरु भएको दोलखाको चर्नावती खोला जलविद्युत आयोजनाको साधारण शेयर निष्काशन भएको छ ।
पूर्व पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेल, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका, कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, कुमार पाण्डे लगायत प्रवर्धक रहेको नेपाल हाइड्रो डेभलोपर कम्पनीले साधारण शेयरको निष्काशन भएको हो । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका तीन लाख ९० हजार कित्ता शेयर निष्काशन गरेको हो ।
कम्पनीमा दोलखाका सांसद समेत रहेका पोखरेलको एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । उनले एक लाख ३५ हजार कित्ता शेयर लिएका हुन । त्यस्तै मुरारकाको दुई करोड ४३ लाख र प्रधानको ४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । प्रधान कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष छन् ।
कम्पनीले दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका ५ स्थित चर्नावती खोलामा ३.५२ मेगावाटको चर्नावती खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी उत्पादन समेत भइ रहेको छ । प्रति मेगावाट १९ करोड १० लाख रुपैयाँको लागतमा आयोजना निर्माण भएको हो ।
कम्पनीले साउन २७ गते शेयर निष्काशन गरी छिटोमा ३२ गते र ढिलोमा भदौ २५ गते बिक्री बन्द गर्ने जनाएको छ । कम्पनीको शेयरमा न्युनतम ५० कित्ता देखि अधिकतम एक हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक एनएमबी क्यापिटलले जनाएको छ ।
कम्पनीले जारी गरेको साधारण शेयरमध्ये दुई प्रतिशत (७ हजार ८०० कित्ता) कर्मचारीको लागि र सामुहिक लगानी कोषहरुको लागि पाँच प्रतिशत (१९ हजार ५०० कित्ता) आरक्षित गरिएको छ ।
चर्नावती खोला जलविद्युत आयोजनाले २०७० जेठ २४ गतेदेखि ब्यापारिक उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले आर्थिक बर्ष २०७०।७१ देखि नै मुनाफा आर्जन गर्दैआएको छ । साधारण शेयर निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी २६ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । जसमा ७५ प्रतिशत संस्थापक शेयर धनीहरुको, १० प्रतिशत आयोजना प्रभावितहरुको र १५ प्रतिशत सर्बसाधारण शेयर धनीको स्वामित्व रहनेछ । स्थानीय प्रभावितका लागि स्थानीय चर्नावती साना किसान सहकारी मार्फत सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा विज्ञापन गरेर भीमेश्वर नगरपालिका साविकको वडा नं. ६, ८, ९, ११ र १२ का नागरिकबाट लाखौं रकम ३ वर्ष अघि नै झुक्याएर उठाइएको थियो । त्यो रकम अहिले २ वर्षपछि स्थानीयको लागि खुलेको स्थानीय सेयरमा समेत आवेदन गरिएन ।
२०६७÷६८ तिर पोखरेल निकटका केही एमाले कार्यकर्ता, शिक्षक र कर्मचारीहरुले संस्थापक शेयरका लागि भन्दै पोखरेलकै बैंक खातामा रकम जम्मा गरेका थिए । तर अहिले त्यो रकम पनि न कम्पनीको नाममा छ, न त्यसले कुनै प्रतिफल दियो । कम्पनीको नाममा जम्मा भएको भए उनीहरुले सेयर प्रमाणपत्र पाउँथे । तर रकम जम्मा नहुँदा त्यसबाट प्रतिफल त के ? साँवा नै हराउने हो कि भन्ने लगानीकर्तामा चिन्ता छ । ती लगानीकर्ताहरुको रकमलाई संरक्षण गर्नका लागि एक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी बनाएर सदुपयोग गर्ने भन्दै खानेपानी विभागका पूर्व महानिर्देशक समेत रहेका इन्जिनियर हरिप्रसाद शर्मा बजगाईको नेतृत्वमा कम्पनीको मस्यौंदा तयार पर्ने जिम्मेवारी समेत दिएका छन् ।
एनएमबी क्यापिटल नागपोखरी र नेपाल हाइड्रो डेभलोपरको कार्यालय डिल्ली बजारबाट कम्पनीको आइपीओ आवेदन दिन पाइनेछ । साथै आस्वा सुविधा भएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर आवेदन दिन मिल्छ ।
हाइड्रोले यसअघि मंसिर २६ गतेदेखि पुस १० गतेसम्म दोलखाका आयोजना प्रभावित स्थानीयबासीलाई दुई लाख ६० हजार कित्ता साधारण सेयर बिक्री गरी बाँडफाँड गरिसकेको छ ।
कम्पनीलाई इक्रा नेपालले रेटिङ चार प्रदान गरेको छ, यसको अर्थ कम्पनीको वित्तीय अवस्था अति कमजोर रहेको बुझिन्छ । कम्पनीको अबस्था खासै राम्रो नरहेको, केही बर्षसम्म लाभांश नपाउने अबस्था र धेरै जनाले आबेदन गर्दा बढीमा १० कित्ता मात्र सेयर पर्ने संभावनाका कारण थोरै रकम मात्र आबेदन गर्दा लगानीकर्ताको हित हुने देखिन्छ ।